परराष्ट्रको विज्ञप्तिः 'न भाषा, नत आधिकारिता' | Citizen Post News
परराष्ट्रको विज्ञप्तिः 'न भाषा, नत आधिकारिता'
२०७६ कार्त्तिक २१ गते १०:२१
काठमाडौं । बुधबार पराष्ट्रको लेटर हेडमा एउटा विज्ञप्ति निक्लियो । जुन भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग पारिएको बारे थियो । २०७६ कार्तिक २० गते मात्र लेखिएको उक्त विज्ञप्तिमा जारी गर्ने ब्यक्तिको हस्ताक्षर हो कि होइन ? त्यो प्रष्ट छैन ।
परराष्ट्र जस्तो सरकारको जिम्मेवार निकायले विज्ञप्ति जारी गर्दा कर्मचारीको नाम, पद, पत्र संख्या, चलानी नम्बर आदी इत्यादीको कुनै प्रयोग नगरेका कारण त्यसको आधिकारिकतामाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
जबकि विज्ञप्तिमा निकाल्ने संस्था, जारी गर्ने आधिकारिक ब्यक्तिको नाम र पदसहित हस्ताक्षर हुनुपर्ने मान्यता हुन्छ । यतिखेर उक्त पत्रको आधिकारिता विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
कतिपयले यसलाई नक्कली भनिरहेका छन् भने कतिपयले जनआक्रोशलाई मत्थर पार्नका लागि मात्र सरकारले झारा टार्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भनिरहेका छन् । विज्ञप्ति परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव वा सूचना अधिकारी कसले जारी गरेको हो ?
या अन्य कुनै दर्जाका कर्मचारीले जारि गरेको हो त्यो भने अन्यौल कायम छ ।
किन त्यसो गरियो ? चासोको विषय पनि बनेको छ । परराष्ट्रले जनताको आक्रोश र आवेशलाई मत्थर पार्न कै लागिग यो विज्ञप्ति बलपूर्वक सार्वजनिक गरेको पनि आरोप लगाइरहेका छन् ।
विज्ञप्ति झारा टार्ने खालको 'म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर' भन्ने उखानसँग पो मेल खान्छ । नत विज्ञप्ति सीमा मिचिएको बारे विरोध गरिएको छ, नत नक्सा सच्याउन जोड दिइएको छ । नेपालले न त अडानका साथ आफ्नो विषयबस्तु राखेको देखिन्छ ।
तर विज्ञप्तिको एउटै पक्ष राम्रो के छ भने कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिएको छ ।
विज्ञप्तिको गाम्भिर्यता बोध हुनका लागि भए पनि विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्था, ब्यक्तिको नाम, हस्ताक्षरलगायतका महत्वपूर्ण कुराहरुको समावेश हुन जरुरी छ । तर विज्ञप्तिमा त्यसो गरिएको पाइएन । सरकारी यो कदमलाई झारा टार्ने कामको रुपमा अथ्र्याइएको छ । यदि छुटेका यी विषयबस्तु विज्ञप्तिमा उल्लेख भइदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।
विज्ञप्तिको सुरुमै विभिन्न सञ्चारमाध्याम र टिकाटिप्पणी पछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । जसलाई आमसर्वसाधारण पचाउन सक्ने स्थिति छैन । यो शब्दावलीलाई धेरै अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
धेरैमध्ये एक, 'तिमीहरुको कदमप्रति हामी जानकार छैनौं वा छौं तर हामीले बोल्नुको कारण विभिन्न सञ्चारमाध्याम र जनताले टिकाटिप्पणी भएकाले मात्र हो' पनि हुन सक्छ ।
यो मानेमा यहाँ भाषागत रुपमा अलिकति कमजोर देखिएको छ । एउटा सरकारले अर्को देशको सरकारलाई सम्वोधन गर्दै समस्या उजागर गर्न प्रयोग भएको शब्दावली ठिक नभएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
अब त्यसपछिको हरफतिर जाऔं । जसमा भनिएको छ,'कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।'
यो नै विज्ञप्तिको महत्वपूर्ण र बलियो पक्ष हो । सरकारले सव्य भाषामा सवैले बुझ्ने गरी लेखेको छ कि कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो । जुन निकै सकारात्मक छ, बौद्धिक भाषाको छनौंट भएको छ । आफ्नो कुरा स्पष्ट रुपमा राखेको देखिन्छ ।
अब परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिको तेस्रो हरफतिर लागौं ।
जहाँ लेखिएको छ,'नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैंठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्वन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्वन्धी विषयहरुहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।'
यहाँ केही अडान पनि छ । एक पक्षीय रुपमा भारतले लिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने उल्लेख छ । यहाँ विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका सीमा सम्वन्धी विषय र विवादलाई उजागर गरिएको छ । समस्यालाई दुवै पक्षको सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
महत्वपूर्ण विषय के हो भने कालापानी विवादीत क्षेत्र होइन, यो त र्निविवाद नेपाली भूमि हो । जुन भारतले लामो समयदेखि कब्जा जमाएर बसेको छ । यहाँ नेपाल सरकार अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि अन्य विवादीत सीमा समस्यालाई समाधानका लागि लेखिएको शब्दावली सहि नै मान्नुपर्छ ।
विज्ञप्तिको अन्तिम हरफ,
जसमा लेखिएको छ,'नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना रक्षाका लागि प्रतिवद्ध छ र दुई मित्र राष्ट्रहरु बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य, प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यामबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ ।'
सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएको कुरा उल्लेख गर्नु अर्को राम्रो पक्ष हो । सीमा विवाद समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य र प्रमाणहरुको आधारमा हुनुपर्छ भन्नु पनि राम्रो मान्नुपर्छ ।
कूटनीतिक माध्यामबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकरार तत्पर भएको कुराले नेपाल सरकार विवाद र लफडा भन्दा पनि मित्रता र भारत छिमेकी भएको हिसाबले युद्धबाट होइन, कूटनीतिक माध्यामबाट समस्याको समाधान खोज्न प्रतिवद्ध भएको सन्देश दिइएको छ ।
कालापानीलगायतका क्षेत्र ऐतिहासिक, तथ्य र प्रमाणहरुको आधारमा नै र्निविवाद नेपाली भूमि हो ।
जुन भारतले कब्जा जमाइरहेको छ । त्यसप्रति विज्ञप्ति लक्षित भएको देखिन्न । यसो भन्नका लागि कुनै विवादीत क्षेत्र होइन । विशुद्ध नेपालको भूमि हो । भारत उक्त भूमिलाई विवादित भूमिका रुपमा स्थापना गराउन चाहान्छ । सोही अनुसार उसले मौकामा चौका हानेको त्यो जाल हो । यहाँ सरकार चुकेको देखिन्छ भने कूटनीटिक भाषामा सरकारले आफ्नो भूमिप्रति अडान लिन नसकेको देखिन्छ ।